Shariif Sheikh Axmed “NISA Waxay Cabsi Galin Ku Haysaa Madaxda Qaranka” – XAMAR POST
Iyadoo Hay’adda nabad sugidda iyo sirdoonka Qaranka ee NISA ay soo saartay digiin culus oo ku aaddan in Al-Shabaab ay diyaariyeen qorshe lagu qaarijin rabo Ra’iisul wasaare Rooble iyo Madaxweyne farmaajo ayaa waxaa arrintaasi war kasoo saaray Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna Musharax madaxweyne Shariif Sheikh Axmed.
Waxaa uu ku eedeeyay Hay’adda inay waddo marin habaabin iyo cabsi galin xooggan oo ay ku hayso madaxda dalka.
Waxaa uu baaqay Raysul Wasaaraha JFS iyo Golahiisa wasiiradda in ay qaataan masuuliyadooda ku aadan arrimaha Amniga Dalka kana hortagaan wax kasta oo khalkhal gelin kara amniga Madaxda iyo Shacabka Soomaaliyeed.
Waa ayaan darro aad uweyn in hey’adii loo igmadey Amniga Qaranka dalka in ay dacaayad u sameeyneyso kooxaha argagixisada hormuudna u noqotey cabsigelinta madaxda qaranka, waxay calaamad weyn u tahay digniino muddo la bixinaynay oo ah isku milanka hay’adda Nabadsugidda qaranka iyo kooxda Argagixisada taasoo ka dhalatay siyaasadeynta qaybaha kala duwan ee ciidanka amniga Qaran.
Sidaas daraadeed waxaan ugu baaqayaa Raysul Wasaaraha JFS iyo Golahiisa wasiiradda in ay qaataan masuuliyadooda ku aadan arrimaha Amniga Dalka kana hortagaan wax kasta oo khalkhal gelin kara amniga Madaxda iyo Shacabka Soomaaliyeed.
Waxaa nasiib daro weyn ah in digniinta hay’adda NISA lagusoo beegay xilli ay habsami u socoto shahaadasiinta xildhibaanada barlamaanka 11 iyo dhaarinta xildhibaanada oo loo madlanyahay 14 bishan, sidaas darteed waxaan uga digayaa Mdaxweynaha JFS iyo hay’adaha amniga ee hoos yimaada wax waliba oo khalkhal gelinkara geedisocodka doorashada dalka.
Gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo gacanta lagu soo dhigay